Wasaaradda Gaashaandhiga Somaliya oo Ciidamo isku Biirinaysa – Radio Daljir
Oktoobar 10, 2015 5:16 b 0
Sabti, Oktoobar 10, 2015 (Daljir) —Wasiir kuxigeenka wasaaradda gaashaandhiga ee xukuumadda Soomaaliya Cabdalla Xuseen Cali iyo wafti uu hogaaminayo ayaa booqasho kutegey deegaanka lambar 50 ee gobolka Shabeellaha hoose oo siweyn loogu soodhoweeyey.
Kuxigeenka wasiirka wasaaradda gaashaandhiga ee Soomaaliya ayaa waxaa socdaalkiisa ku weheliyey ammaan duulaha ciidamada xooga dalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya, iyagoona u kuurgalay xaaladda deegaanka.
Wasiirka iyo saraakiisha la socotay ayaa deegaanka Lambar 50 kula kulmay waxgaradka deegaankaasi, waxeyna kala hadleen sidii ciidamada XDS loogu soo biirin lahaa maleeshiyaad hubeeysan oo ku sugan halkaasi, kuwaasoo ah kuwa deegaanka.
Waftigaan uu hogaaminayey wasiir kuxigeenka gaashaandhiga iyo dadka deegaanka ayaa kulamo ay wada qaateen waxa ay isku raaceen in xaaladda ammaan ee guud ahaan deegaanka laga shaqeeyo, gacana lasiiyo ciidamada xooga dalka.
DHAGAYSO: Barnaamijkii Saaka iyo Dunida _Sabti_10